उदाहरणीय घरबेटी ! डेरावाल संक्रमितलाई राख्न घरमै बनाइदिए आइसोलेसन – Dainik Sangalo
August 25, 2020 242
विराटनगर । काठमाडौ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा संक्रमित भएको थाहा पाएपछि छिमेकी र आफन्तले पनि अपहेलना गरेको समाचार बाहिरिएका छन् । तर विराटनगरमा भने एक परिवारले कोरोना संक्रमित भएकी एक युवतीलार्य आफ्नै घरमा आइसोलेसन बनाईदिएका छन् ।
आफ्नो घरमा भाडामा बस्ने युवतीलार्य उनीहरले घरमा एउटा कोठा आइसोलेसनका लागि दिएका हुन् । विराटनगर महानगरपालिका–३ मा भाडा बस्ने १९ वर्षीया युवतीमा दुई साताअघि कोरोना पुष्टि भएपछि डराएकी थिइन् । काठमाडौं घर भएकी उनी १४ वर्षीय भाइलाई साथमै राखेर उनी काठमाडौंमै बस्थिन्।
बन्धन सिमेन्टका मेनेजर रहेका बाबु भने आमासहित विराटनगरमा कोठा भाडा लिएर बस्थे। कोरोनाका कारण क्याम्पसको पढाइ बन्द भएपछि बाबु र आमा भएकै ठाउँमा विराटनगर आएकी युवतीलाई कोरोना देखियो।
पहिलो पटक परिवारभित्र युवतीका ठूलोबामा कोरोना देखिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिक रहेका विराटनगर–३ का ५७ वर्षीय उनका ठूलोबाको भने साउन २८ गते विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचारकै क्रममा मृ’त्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमित ठूलोबाको सम्पर्कमा रहेका कारण ‘कन्टयाक्ट ट्रेसिङ’मा परेका उनीसहित परिवारका चारै जनाले स्वाबको परीक्षण गराए।
पीसीआर परीक्षणका क्रममा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। बाबु, आमा र भाइको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। त्यसपछि आ’त्तिएका बाबुआमाले भाडा बसेको घरमा नराखिकन युवतीलाई बाहिरबाहिरै राख्दै आएका थिए।
तर उनलाई कोरोना भएकाले अन्यत्रै लगिएको कुरा चाल पाएका घरबेटी कृष्णकुमार सुवेदी र पत्नी राधा सुवेदीले युवतीलाई बाहिर नराख्न तथा बोलाएर आफ्नै घरको एउटा कोठामा राख्न आग्रह गरे।
सुवेदी दम्पत्तिले संक्रमित युवतीलाई राख्नका लागि घरमै एउटा कोठा आइसोलेसनका लागि छुट्याइदिए। सुवेदीको दुई तल्ले घर छ । भुई तल्लामा संक्रमित युवतीलाई छुट्टै शौचालय र कोठा व्यवस्था गरिदिएका छन् । युवतीको परिवारलाई पनि छुट्टै शौचालय बनाइदिएका छन् । सुवेदी श्रीमती र छोरासहित दोस्रो तलामा बस्छन् ।
‘यो रोगले धनी गरिब सकैलाई छोड्दैन’ उनले भने ‘मान्छे म’र्दा छुन समेत पाइन्न, यस्तो बेला हामीले मानवता देखाउनुपर्छ ।’ संक्रमितलाई मानवीय व्यवहार गर्दै सहयोगको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । ‘घरमा सतर्कता अपनाएका छौं’ सुवेदीले भने, ‘हाम्रो परिवार घरबाट बाहिर निस्किएको छैन । संक्रमितको अवस्था दिनमा एक पटक बुझ्छु ।’
Prevकोरोनावाट बुवाको निधन भएपछि ‘छरछिमेकले बाबुको किरिया बस्न पनि नदिएर परिवारलाई लखेटे’!
Nextबिदेशमा बेपत्ता श्रीमान भेटिए काठमाडौंमै , ४ वर्षसम्म अर्कैसँग रहेको खुलासापछि पर्यो ल’फडा (भिडियो)
भर्खरै फेरियो अबको निषेधाज्ञा मोडालिटी : अबदेखि ‘लुजडाउन
पेङगोङ तालमा भारतीय सेनाको ठुलो झड्का, चिनियाँ सेनाले यसरी बढायो गस्ती